လှချင်ရက် စက်စက်ယို…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လှချင်ရက် စက်စက်ယို….
Posted by hmee on Oct 11, 2011 in Creative Writing | 40 comments
အင်း….ဆံပင်တွေက ရှည်နေပြီ။ ပုံမကျ ပန်းမကျမို့ နဂိုရှိရင်းစွဲထက် အသက်ကြီးသလိုလို။ အမှန်တော့ ငယ်လည်း ငယ်မှ မငယ်တော့တာ။ ထွက်လာကာစက ညှပ်နေကျ ဆိုင်မှာ “ညီမရေ အမနဲ့ လိုက်မယ် ထင်တာထဲက အတိုဆုံးပုံ ညှပ်ကွာ” ဆိုပြီး ညှပ်ခဲ့သော်လည်း အခုတော့ သူရှည်လေပြီ။ ဟိုး…. အရင်ကတော့ အိမ်ရှိ လူကုန် အားကိုးပြီး နေခဲ့သမျှ အခုတော့ ဒုက္ခရော လှလှရောပါ တွေ့ပြီ။ နီးရာလူ သားကိုထိန်း ကိုယ်က အေးဆေး ဆံပင်ဆိုင်မှာ။ အခုတော့ ဆီသည်မ လက်သုတ်ဘ၀ နေ့ခြင်းညခြင်းကို ရောက်တာ။ အိမ်အလုပ်၊ သားအလုပ်နဲ့ တနေ့တနေ့ လျှာအလျှားလိုက် ထွက်လုလု။ နေ့စဉ် မိုးလင်းတာနဲ့ အိပ်ရာ ကပြာကယာထ။ ဆံပင်ကို ကမန်းကတန်း စုစည်း အိမ်မှုကိစ္စတွေ အပြေးအလွှားလုပ်။ ပြစရာ အလုပ်သာ မရှိတာ ကလေးတဖက်နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်မှ အအားရတာ။ တနေ့တနေ့ မိုးလင်းကတည်းက အစည်းခံလိုက်ရတဲ့ ဆံပင်။ သူ့ခမျှာ အိပ်ရာဝင်မှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေခွင့်ရတော့တယ်။ အိမ်နေတုန်း မသိသာပေမဲ့ အပြင်ထွက်မယ်ဆို ဒီ..ဆံပင် ရှိုးပဲ့ပြီ။ အသက်ကသာ ကြီးလာတာ လှချင်စိတ်က မလျှော့နိုင်သေးတော့ အခက်သား။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် သွားဖို့က မလွယ်။ ကိုယ်ပြောတာ သူမသိ သူပြောတာ ကိုယ်နားမလည်မို့ နားလည်မှုလွဲပြီး ညှပ်ရင် ကိုယ်ကျိုးနဲပြီ။ အင်္ကျီလို မကြိုက်လို့ လဲဝတ်လို့ ရတာမဟုတ်။ အော်…ခက်ကပြီ။ ဆံပင်ညှပ်ဖို့ အရေး တွေးတွေးပြီး ရတက် မအေးရင်းက ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီဆံပင်နဲ့ပဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ တွေးမိပြီး ကိုယ့်ဘာသာ သဘောတကျ။ အင်း….ခပ်ငယ်ငယ် အရွယ်က လှချင်လွန်းလို့ ရောဂါတွေ တက်ခဲ့တာ။ ဘာေ၇ာဂါ ဖြစ်၇မလဲ အကောက်ရောဂါ။ တီဗွီမှာ အိန္ဒြာကျော်ဇင်လေးက ဆံပင် အကောက်လေးနဲ့ ယုဇနဒန်ပေါက် ကြော်ငြာပါရော။ ဆံပင်ကောက်လေး တ၀ဲဝဲနဲ့ ကြော်ငြာတာများ မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး။ သူက အိန္ဒြာကျော်ဇင်မို့ လှပေမဲ့ ကိုယ်က သိတဲ့အတိုင်း ပွင့်လောက်နီးနီး။ ရောဂါတက်နေချိန်မို့ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော နားမ၀င်ရေးချ မ၀င်ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ရောက် အနှစ်နှစ်အလလက ထားထားတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို ကောက်ဖို့ ကြံပါတော့တယ်။ စိတ်ထဲ လှမယ်ပဲ ထင်နေတာကိုးလို့။ ဆံပင်ညှပ်မှ နာမည်ရဆိုင်မှာတောင် လွန်ရောကျွံရော (၇၀၀)။ မသကာ (၁၀၀၀) ခေတ်။ အိတ်ထဲပါတာက (၁၀၀၀၀)။ ဒါဆို လောက်တယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကို ဆုံးဖြတ် အကောက်ဇာတ်လမ်း စပါတော့တယ်။ အဲ….ခေါင်းကြီးပေါင်းပြီး စောင့်နေတုန်း ဘယ်လောက်ကျမလဲ စပ်စုတော့ (၁၅၀၀၀) ဆိုတော့ကာ။ လူကို တခါတည်း ဇောချွေးကို ပြန်ရော။ ပါတာက (၁၀၀၀၀) ဘယ့်နှယ့် လုပ်ရပါ့ အရှက်တော့ ဗျန်းဗျန်းကွဲပါပြီ။ အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခက်ပြီး လှချင်စိတ်တွေ ကြက်ပျောက် ဌက်ပျောက်ပျောက်ကုန် ပါလေရော။ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာပဲ တတွတ်တွတ် ရေရွတ်ရင်း ကြံ၇ာက မရဘူး။ နောက်ဆုံးမှ “ဟာ….ဒီနားမှာ အဒေါ်တယောက် အိမ်ရှိသား” လို့ တွေးမိပြီး အဖော်ပါလာတဲ့ ညီမလေးကို ပိုက်ဆံသွားချေးခိုင်းလိုက်ရတယ်။ တယောက်တည်းသာဆို တွေးတောင် မတွေးရဲဘူး။ လှမလားလို့ လုပ်မိပါတယ် တမျိုးလုံး ပြောမဆုံးဘူး။ လှချင်တာ ကံကောင်းလို့ အရှက်မကွဲတယ်။ ဒါလည်း မှတ်လားဆိုတော့ လုံးဝ မမှတ်ထဲကပဲ။ နောက်ပိုင်း ဆံပင်ပုံ အမျိုးမျိုး ပြောင်းပြီး သကာလ ထပ်ပြီး ခေတ်စားလာတာက ရေစိုကောက်။ မော်ဒယ် Zအဘောက် ကလည်း အဲ့ပုံလေးနဲ့ လှမှလှ။ ကျွန်မလည်း တကျော့ ရူးပြန်ပါတော့တယ်။ ကောက်တာများ လွယ်မှတ်လို့ အတော် ဒုက္ခခံရတာ တနေကုန်ရော။ ကောက်တုန်းကတော့ ပြသနာ မ၇ှိပေမဲ့ နောက်နေ့တွေမှာ လာပြီ နောက်ဆက်တွဲတွေ တသီကြီး။ မနက်တိုင် အလုပ်သွားဖို့ ပြင်ပြီဆို ခါတိုင်းထက် စောထရတဲ့ ဒုက္ခ။ သေချာတာပေါ့ ဒီဆံပင်ကောက် ကြောင့်။ ဘာမှ မလိမ်းပဲ အပြင်ထွက်မယ်ဆို ဌက်သိုက်လေလော ဆံပင်လေလော သံသယ ၀င်ချင်စရာမို့ သူ့အတွက် အချိန်သတ်သတ် ယူရပြီ။ သူကေ၇စိုကောက် ဆိုတဲ့အတိုင်း မနက်မနက် လိမ်းရတာက ၀ါးတာဂျဲ ဆိုတာရယ် နောက်တမျိုးရယ်။ သိပ်တော့လည်း မှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကြာပြီကိုး။ ဆံပင်က အုံထူထူမို့ တော်ရုံလိမ်းမရ။ ရေလေး နဲနဲကူမှ ပုံစံတကျ လှလှ ပပ။ သူများက “ဟယ်…. လှလိုက်တယ်ဟယ် နင့်မျက်နှာလေးနဲ့ လိုက်တယ်တော့” ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထား လှတယ်ပြောလို့ သွားကြီးကို ဖြီးလို့။ ဒါနဲ့ပဲ လှချင်လွန်းလို့ နေ့တိုင်း ဒုက္ခတွေခံလိုက်တာများ တခါတည်း အအေးမိပါလေရော။ ဒါလည်း လျှော့သလားဆိုတော့ နိုး။ ဖျားနေရက်နဲ့ ရေအဖြန်းကောင်းလို့ နောက်ဆုံး တိုက်ဖွိုက် ဖြစ်ပါတော့တယ်။ တလလောက် အစာ မစားရပဲ ခံလိုက်ရတာများ စိတ်နာချက်။ ဒီဆံပင်ကြောင့်ဟဲ့လို့ စိတ်နာပြီး သကာလ ပြစ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မ အမေကတော့ ပြောရှာပါတယ် “ညည်းနှယ်အေ ဒီကြွက်သိုက်များ လှတယ်ထင်ပြီး ခေါင်းပေါ်တင်ရသလား မသေတာ ကံကောင်းအေ” တဲ့။ အမျိုးတွေ ကြားထဲလည်း ဟိုးလေး တကြော်ကြော် သတင်းလေးများ မွှေးလို့။ “ညည်းလောက် လှချင်တာ တို့ အမျိုးထဲ ကြားလည်း မကြားဖူးဘူး။ ကြုံလည်း ကြုံဖူးပါဘူး” လို့ ထောပနာပေးတာက အမေကြီး။ “လှချင်ရက် စက်စက်ယို မသေတာ ကံကောင်း” ဆိုတာက တမျိုးလုံး မှတ်ချက် ပေးတာပါ။ ကျွန်မလည်း လူတွေ့တိုင်း အစ ခံရလို့ စိတ်နာချက်။ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လှချင်လွန်းလို့ ဖြစ်တာ။ ကျွန်မနဲ့ ဆံပင်အကောက် မတည့်တာများ ကောက်တိုင်း ပြသာနာ တက်တာပါ။ အဲ…ဒီလောက် ခံခဲ့ရတာများ မှတ်တယ် ထင်လို့လား။ ဟဲဟဲ…..အခုတလော ဂျုးမလေးတွေ စတက်ဆံပင်ပုံလေးတွေကို အဖျားလေးတွေ ခွေထားတာ မျက်စိထဲ လှသလိုလို။ တယောက်ကနေ နှစ်ယောက် သုံးယောက် လှတပတလေး မြင်လိုက်မိပြီ ဆိုမှဖြင့် လိုက်ငေးရင်း အားကျ။ အဲ့..ပုံလေး ညှပ်ရင်ကောင်းမလား တွေးမိပြီ ဆိုတာနဲ့ တဆက်တည်း မမှတ်သေးဘူးလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကမန်းကတန်း သတိပေးနေရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မလည်း ပုံမကျ ပန်းမကျ ရှည်လာတဲ့ ဆံပင်ကို ခေါင်းစည်းကွင်းလေးနဲ့ စည်းပြီး ဒီနေ့ အထိ နေနေ ရတုန်းပါပဲရှင်။
မှီရေ ကျမလည်း မနှစ်က တခါ ကောက်ဖူးတယ် တသက်မှာ တခါ ကောက်ဖူးတယ်ရှိအောင်ဆိုပြီး..ကရိကထ များလိုက်တာမှ. .. စစချင်းတပတ်လောက်ပဲ ပြုပြင်ပြီး နောက်ပိုင်း ဘာမှလည်း မလိမ်း ဆံပင်တွေလည်း ခါတိုင်းလိုပဲ ဖီးချလိုက်တာ …နဂိုဆံပင်ကလည်း အဖြောင့် ဆိုတော့ ပြေသွားပါရော အကောက်တွေ ….
ကုန်ရတာနဲ့တောင် မတန်ပါဘူး.. ..
ွမှီ ရေ- ကိုယ့်အရွယ်နဲ့ကိုယ် လူတိုင်းကိုယ်စီ ရူးဘူးကြတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
တို့လည်း ငယ်ငယ်က အမရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က (အိမ်မှာပဲ မကြာခဏ လာနေ၊ လာအိပ်လေ့ရှိတော့ အမအရင်းလိုပဲ ခင်နေတာ) အလှပြင်သင်တန်းသွားတက်တော့ လက်သင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် ခေါင်း ခေါ်လာပြီး ဆံပင်ကောက်ပေးခွင့် ရှိတယ်ဆိုလို့ လိုက်သွားမိတယ်။ (အမှန်က ဆိုင်ကိုလာတဲ့ ဖောက်သည်နဲ့ လက်သင်ကောက်လို့ မရလို့ ပြဿနာ မရှိအောင် ကိုယ့်လူကိုယ် ခေါ်လာခိုင်းတာ။) ကပ္ပလီဆံပင်လို လိမ်ကောက်ကွေးနေတော့ ဘာများဆက်လုပ်ပေးဦးမလဲဆိုပြီး စောင့်နေတာ။ ခဏနေတော့ အမသူငယ်ချင်းက ပြန်ချင်ရင်ပြန်နှင့်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘာမှမပြောရဲပဲ အိမ်ပြန်ပြီး ငိုရတော့တာပေ့ါ။ အမသူငယ်ချင်း ပြန်ရောက်လာတော့ အမက င့ါညီမကို နင်လုပ်ပေးလိုက်တာ မျက်ရည် တစ်တိုင်ကီလောက် ကုန်သွားတယ်လို့ ပြောပြီး ရီကြတယ်။
ဟုတ်တယ် pooh ရေ ကုန်ရတဲ့ငွေနဲ့ကထိကထများတာကတော့ လှချင်တာနဲ့ တန်တောင်မတန်ဘူး။ ရူးတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပဲ။ အဲ့တုန်းက ဆံပင်ကောက်လေးနဲ့မှ ပိုလှမယ်ပဲ စိတ်ကထင်နေတာနဲ့ သွားကောက်တာ မမရေ။ တင်ပါးကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဆံပင်အရှည်ကြီးကို နှမျောရမှန်း မသိလေ။ ပိုက်ဆံလည်းကုန် ဆံပင်လည်းကုန် အမေကဆို နှမျောမဆုံးဘူး။ ရူးတာလေ။
အန်တီမှီ ရဲ့စာကို ဖတ်အပြီး
ကိုငှက်ကြီး ရဲ့ သီချင်းကို သတိရတယ် ဗျာ
“ အရင်တိုင်းလှတယ်..လှပြီးသားပါ ၊ ဆံပင်တွေ ရှည်တော့ မဖြတ်ပါနဲ့”
ဆံပင်တွေ အတိုတော့ မဖြတ်ပါနဲ့ …လုပ်ပါ ဆြာရယ်…:D
ဆံပင်တွေ ဈေးကောင်းနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
သူ့ ပြောရတာနဲ့ 
ကျုပ် အကြံ လူမိကုန်ပါပြီ ဗျို့ 
မောင်ပေ တော့ အရိုက်ခံရတော့မယ်…….. ဟင်းးး ဟိုက …….
မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုရင်.. ဆံပင်ရှည်ဖြောင့်နဲ့မှ.. လိုက်တယ်ထင်မိတယ်..။
ခုခေတ် လူငယ်ယောင်္ကျားလေးတွေ.. တန်းတူမိန်းကလေးတွေအပေါ်.. ဆံပင်အရှည်နဲ့ အတို.. ဘယ်ဟာကို ပို..
မြန်မာအ၀တ်အစားနဲ့ဆို ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့မှ ပိုလိုက်ဖက်တာ။ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ဆိုတော့ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ လိုက်မှလိုက်။ တော်ရုံအ၀တ်အစား မရွေးဘူး။ အဲ..ကောက်လည်းကောက်လိုက်ရော ဟို..ဟာနဲ့မလိုက် ဒီ..ဟာနဲ့မလိုက် အတော်ဂွကျကုန်တာပဲ။ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများကတော့ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့မှ ယဉ်တယ်ထင်ကြတာမို့ သဂျီးရေ ဗုတ်ရင် အရှည်က ပိုမဲသာမယ် ထင်ပါကြောင်း။
တချို့တလေ ဆံပင်ကောက်တာနဲ့ တော်တော် ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါ.. ဒါပေမဲ့ ဆံပင်အရှည်နဲ့ဆိုပိုပြီးနှစ်သက်ပါတယ်…
ဘာသာရေးပြင်းထန်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲဂျူးမတွေဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ ခေါင်းတုံးရိပ်ရတယ်၊ အပြင်ထွက်မှ ဆံပင်တုတပ်တယ် ပြောသံကြားတယ်။ အဲဒါမျိုး အန်တီမှီ ဘယ်နှယောက်တွေ့ဖူးလည်း သိချင်ပါတယ်။
အရှည်ဖြောင့်ထားရင် ကြည့်ရတာ ငြိမ်းအေးပါတယ် ၊
ဆံပင် ကွေးကောက်ထား တယ်ဆိုရင်လဲ တစ်မျိုးလေး ကောင်းပါတယ် ၊
အိုဗျာ. . ပလို့ ဂျိ……….
မိန်းကလေးဆိုတာကတော့မှီရယ်.. သူများလှနေတာတွေ့ရင် ကိုယ်လည်းလှချင်တာပေါ့။ အခုကကျတော့လှချင်ပေမဲ့လည်း လှအောင်လုပ်ဖို့အချိန်မရှိတာလား…။လှအောင်လုပ်ဖို့ကိုသိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့တာလား…၊ အဲတာကြောင့်ပြောတာပေါ့၊ ယောက်ကျားမယူပါနဲ့လို့…
အဲ့ဒါမျိုးတော့ တခါမှ မတွေ့ဘူးဖူး ကိုကြောင်ရဲ့။ ဘာသာရေးပြင်းထန်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲဂျုးမတွေက အိမ်ထောင်သည်ဆို ခေါင်းပေါင်းအမည်း (သို့) ဦးထုတ်အမည်း ဆောင်းလေ့ရှိတယ်။ ဆံပင်တွေတော့ အကုန်သိမ်းထားတယ်။ အဖြူနဲ့အမည်းပဲ ၀တ်ရတယ်။ တခြားအရောင် မ၀တ်ရဘူး။ လက်၊ခြေထောက် လုံးဝမပေါ်ရဘူး။ ကလေး လူကြီး အကုန် ဒီအတိုင်းပဲ ၀တ်ရတယ်။ ယောက်ကျားတွေဆို ရှပ်အဖြူလက်ရှည်၊ စတိုင်ဘောင်းဘီ အရှည် လောင်းကုတ် အမည်း အရှည်ကြီးတွေ ၀တ်ပြီး ကောင်းဘွိုင်ဦးထုတ် အမည်းတွေ ဆောင်းထားတယ်။ နားသည်စပ်က ဆံပင်က အရှည်ကြီး ချထားတယ်။ ဘောင်းဘီ ဘေးဖက် နှစ်ဖက် ခါးပတ်ကွင်း နေရာမှာ အဖြူရောင်ကြိုး နှစ်စ ချည်ပြီး ချထားတယ်။ သူတို့ကို ရဘိုင်တွေလို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ကျား ကလေးလေးတွေက ခေါင်းမှာ လက်တ၀ါးစာလောက် ဦးထုတ်လေးကို ကလစ်လေး ညှပ်ပြီး ဆောင်းထားတယ်။ ရဘိုင်မိသားစုပုံကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပါတယ် နောက်ကျမှ တင်ပေးပါမယ်။ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့သူဆို ဆံပင်တော့စည်းထားတယ်။ ဦးထုပ်တော့ မဆောင်းထားဘူး။ အယူမသည်းတဲ့ ဂျုးမတွေကတော့ အ၀တ်အစား အပြင်အဆင် လန်ထွက်နေတာပဲ။
သြော် မိန်းကလေးတွေများ လှချင်ပချင်လွန်းလို့ ဆံပင်ကောက်ဟဲ့ ဖြောင့်ဟဲ့ နဲ့..
တွေ့ဖူးတာတော့ အသိတစ်ယောက်ရဲ့ တူမလေးမှာ ဖြောင့်လွန်းကောက်လွန်းလို့
ဆံပင်တွေ ပျက်သွားတယ်ပြောတယ်ဗျ….။ ဂတုံးတုံးလိုက်ရရှာတယ် ..။
ကောက်ကြပါ ကွေးကြပါ ဖြောင့်ကြပါ…။
ကြည့်ကောင်းတဲ့အလှမျိုး ဆိုရင် ကျုပ်လဲ ကြိုက်ပါတယ် ..။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘာမှမလုပ်ရဘဲ အခန့်သားနဲ့ နေရမယ် ဆိုရင် ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ကလှတယ်။
အလုပ်ကလဲ ယောက်ျားနဲ့တန်းတူ လုပ်ရသေး ထမင်းဟင်းကလဲချက်ရသေး ကလေးတွေလဲထိန်းရမယ်ဆိုရင်
တော်ကြာ စာကလေးတွေလာပြီး ဥတွေချနေမှာစိုးလို့။။
ဟုတ်ပါတယ် လေးပေါက်ရေ အရင်ကတော့ အိမ်မှာ အခန့်သား နေရတာမို့ သိပ်မသိသာဘူး။ အခုတော့ အိမ်အလုပ်ရယ် ကလေးအလုပ်ရယ်မို့ တခါတလေ အပြင်ထွက်ဖို့တောင် ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း။ သူတို့ တောင်းတဲ့အချိန် တောင်းတာ ပေးနိုင်မှ ငိုသံမကြားရမှာမို့ အထုတ်ကြီး အထုတ်ငယ် ဆွဲရတာနဲ့ အလှဘယ်လောက်ပြင်ပြင် နောက်ဆုံးတော့ ကို့ရို့ကားရာပဲ ဖြစ်သွားလို့ မလှရင်နေပါစေတော့ သပ်ရပ်ရင်ပဲ တော်ပါပြီလို့ စိတ်လျှော့နေရတော့တယ်။
မမှီရဲ့ အရေးသား ကောင်းလွန်းလို့ … ဖတ်ရင်း ပြုံးမိပါတယ် … ။
မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံးဆိုတာ .. ယခင်က ရှိခဲ့ပေမယ့် .. ဒီခေတ်မှာ ဆံပင် အရှည်ကြီးထားရတာမလွယ်တော့ဘူးလေ … ဆံပင်ရှည်ကြီးကြောင့် သွားရလာရ အလွန်အနှောက်ယှက် ဖြစ်ရတာရယ် ဆံပင်အရှည်ကြီးကြောင့် … ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့မရပဲ … ရုပ်ရင့်တာတွေရယ်ကြောင့် … etone ကတော့ .. ဆံပင်အရှည်ဆုံး ခါးလောက်ထိပဲ ထားခဲ့ဖူးတယ် … အခုတော့ .. ကျောလယ်လောက်ပဲ ထားတော့တယ် … ။
ရေစိုကောက်တွေ ခေတ်စားတုန်းက ကောက်ခဲ့ဖူးတယ်… Zအဘောက်နဲ့ပုလဲဝင်းတို့ကို ကြည့်ပြီး .. အဲ့လိုများလှမလား ကောက်မိတာ… ကောက်ပြီးနောက်နေ့ ရုံးသွားဖို့ .. ဆံပင်ထရှင်းရတာ .. အော်ငိုချင်စိတ်ကိုပေါက်ရော … ဆံပင်ပုံစံကျဖို့ … နှစ်နာရီလောက် အချိန်ယူလိုက်ရတယ် … ၀ါတားဂျယ်လည်းလိမ်းရ … ငှက်ပျောသီးဆီလည်း လိမ်းရ… ဟဲကုတ်တွေလည်း လိမ်းရသေးတယ် … ။
ရုံးဆင်းရုံးတက် ကပ်လာတဲ့ ဖုန်တွေနဲ့ နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်ရတာလည်း ..အမောပါပဲ … ။ ဆံပင်ကောက်တာ ကရိကထများသလို … ကောက်ပြီးဆံပင် ပြန်ဖြောင့်လျှင်လည်း .. ဆံပင်တွေ ကြေလွယ်… ။ အခုတော့.. ဆံပင်ဘက်ကို သိပ်အရေးမထားတော့ဘူး …. စိတ်ရှုပ်လို့ အချိန်ပြည့်စည်းထားတာများတယ် … ။
မမှီရေ.. အဲ့ဒီက ဆံပင်ဆိုင်တွေ မသွားဖြစ်သေးဘူးဆိုလျှင်တော့… အားလုံးကို ခပ်မြင့်မြင့်စုစည်းပြီး.. အနောက်ဘက်ကို ဆံထုံးလို လုပ်ထားတာ မမှီမျက်နှာနဲ့ လိုက်မယ်ထင်ပါတယ် … ။
မျက်နှာရှင်းတဲ့ လူက မျက်နှာအကုန်ဖော်လည်း … ကျက်သရေ ရှိနေတာပါပဲ ။
ဟုတ်ပါ့ တုံရယ် လှချင်လွန်းလို့ လုပ်လိုက်ရတာများ အခုပြန်တွေးကြည့်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရယ်ချင်တယ်။ ၀ါတားဂျယ်လိမ်း ပြီးတော့ ငှက်ပျောသီးဆီ ထင်တယ် လိမ်း နောက်ဆုံး ဟဲကုတ်လို့ ဟာလိမ်း ဒါတောင် ဆံပင်က မပိသွားဘူး ရေလေးပါ နဲနဲဆွတ်မှ ဆံပင်က အကောက် အချောင်းချောင်းလေးတွေ ဖြစ်သွားတာ။ မနက်တိုင်း အလှပြင်တာကို ကြည့်ပြီး တအိမ်လုံး မြင်တဲ့သူက ခေါင်းတရမ်းရမ်း။ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတုန်းကလည်း ဇွတ်လုပ်တာ အဲ့လို ခေါင်းမာတာ။ နောက် တိုက်ဖွိုက်ဖြစ်မှ ၀ိုင်းစကြတာလေ။ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကို မချိပြုံးပြုံးနေရတာ။
ဆံပင်ရှည်ရှည်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ဒါဆိုလုပ်ပါဦး … သမီးက ဆံပင်တိုတိုလေးကို ဘာတွေလာစွဲနေကြလည်းမသိပါဘူး …. ဟဲဟဲဟဲ ကြော်ငြာဝင်တာ
အိမ်က မဒီက ဆန္ဒပြနေတာ
ဈေးလေး နဲနဲ စနည်းနာကြည့်လိုက်တာ ..
တစ်သောင်းကျော်ပဲဆိုလို့ ရင်ဘတ်ဖိ ပြန်လာရတယ်။
လက်သင်ကောက် မော်ဒယ်လိုချင်ရင် မှော်ဆရာကို ဆက်သွယ်ပါဗျာ ..
အိမ်က မဒီကို ထည့်ပေးလိုက်မယ် …
လက်သင်ဖြောင့် ဆိုလဲ ရပါတယ် …
အဆင်ပြေရင် ဂတုံးပါ ချောပေးလိုက်ပါ
7 လ လောက်တော့ နားအေးအေး နေရမှာပေါ့
အခုတော့ မင်းက အခုလိုပုံစံလေးနဲ့ လှတာကွ၊ ဘာကွ နဲ့ လှည့်ပတ်နေရပါကြောင်း ….
ကောက်တာသဘောကျရင် ကောက်ပစ်လိုက် မမှီရေ။ ဆံပင်အကောက်က အပြင်ထွက်ဖို့ အလှပြင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပုံသွင်းလို့ရတဲ့ ဒီဇိုင်းဘဲ။ ကျမတော့ ကြိုက်တယ်။ အိမ်မှာနေလို့ စည်းထားထား ထုံးထားထား ပုံပျက်မှာကြောက်ရဘူး။
မီးလဲ အရင်က ဆံပင်အရှည်ကို အရမ်းကြိုက်တာ … ဆံပင်က ခါးကျော်အထိရှည်တယ် … ဆံပင်အဖျားတိရင်တောင် တိတာ နဲနဲများသွားရင် ထိုင်ငိုတာ … အခုနောက်ပိုင်း ဆံပင်ဖြောင့်တာတွေ ကောက်တာတွေ ခေတ်စားလာတော့ ဖြောင့်လိုက်၊ ကောက်လိုက်နဲ့ ကျောလယ်ကနေ မကျော်တော့ဘူး …အခု ပြန်တွေးရင် ဆံပင်ရှည်တွေကို နှမြောလိုက်တာ ….
မှော်ဆရာရေ ကောက်ဖို့သွားမေးတာ (၇၀၀)ပါတဲ့။ တစ်ဒေါ်လာကို ၃.၅ လောက်ရှိတာမို့ ရင်ဘတ်ဖိပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ကလူကြီးကလည်း ပြောပါတယ် စုစည်းထားတာ ရုပ်လေးတောင် ရှင်းနေတာပဲတဲ့။ သူဒီလိုပြောတာ မှော်ဆရာနဲ့ အကြံတူတာ ဖြစ်မယ်။ ရွှေအိရေ အခုတော့ စိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီ ဈေးကြီးလွန်းလို့။ မီးလေးေ၇ မမှီလည်း ဆံပင်ရှည် စထားတုန်းက တကယ်ကို အဖြစ်သည်းခဲ့တာ။ ဆိုင်မှာ သွားတိရင် လက်လွန်မှာ စိုးလို့ အိမ်မှာ အငယ်မကို တိခိုင်းတာ။ အနောက်က မှန်ထောင် အရှေ့ဘက် လက်ထဲမှာ မှန်ကိုင်ထားပြီး ဆရာလုပ်တာ။ နဲနဲများသွားရင် ပြောမဆုံးဘူး။
မိန်းကလေးတွေ ဆံပင်ရှည်ရှည် ၊ ဆံပင်တိုတိုပါ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေမယ်ဆိုလျှင် ပိုကောင်းမယ် ။
တချို့မိန်းမတွေ ဆံပင် စာကလေးအသိုက်ကို လေတိုက်လို့ ဖရိုဖရဲနဲ့ ဆို အတော်ကြည့်ရဆိုးတယ် ။
မမှီရေ နွယ်ပင်လဲ ရေစိုကောက်တုန်းက ကောက်ခဲ့ဖူးတယ်
မမှီပြောသလိုပဲ ဆံပင်အုံထူလို့ လိမ်းလိုက်ရတဲ့ ဂျဲလ် လိမ်းလိုက်ရတဲ့ hair coat
တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပါပဲ လျှော်လိုက်ရတဲ့ ခေါင်းကလဲ မသက်တာဘူး
နောက်ဆို ဆံပင်မကောက်တော့ပါဘူးလို့ တွေးမိတဲ့ အထိပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေ
ကြာသွားလို့ထင်ပါရဲ့ အခုဒစ်ဂျစ်တယ်ကောက်တွေ ခေတ်စားလာလို့ ပြန်ကောက်မိပြန်ရော
အခုလဲ မထူးပါဘူး လိမ်းရတာ မသက်တာဘူးပဲ မနက်မိုးလင်းလို့ အလုပ်သွားခါနီးရင်
ဆံပင်အတွက် အချိန်ပေးရတာက နာရီဝက်လောက်က အသာလေးပဲ
နွယ်ပင့်ရဲ့ တစ်ယောက်သောသူကတောင် လိမ်စရာမ၇ှိလို့ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ်ပြန်လိမ်နေတယ်လို့
ပြောယူရတဲ့ အထိပဲလေ ….
နွယ်ပင်က အဖြောင့်တုန်းကလည်း လိုက်တာပဲ .. ဒါပေမယ့် အခုအကောက်လေးနဲ့က ပိုလိုက်သလိုပဲ
( လိုက်တာလည်း လိုက်တာပေါ့ .. ဒါပေမယ့်… မြှောက်ပေးဦးမှ .. ဒါမှ အိမ်မှာ ဆံပင်ချည်း လိမ်လိမ်နေလို့ .. တစ်ယောက်သောသူနဲ့ .. နှောင်ချိန်ပလေးမှာ )
ဟုတ်တယ် etone ရေ ဆံပင်လိမ်တာ ဘယ်လောက်ထိ အကျင့်ပါနေလဲဆို
တစ်ညက အိပ်ရင်းနဲ့တောင် ယောင်ပြီး ဆံပင်တွေလိမ်နေလို့လေ ….
ဟီးဟီး ..ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ်လိမ်တာလား တစ်ယောက်သောသူ ဆံပင်ကို မှားလိမ်မိတာလား
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ နမူနာပြထားတဲ့ မော်ဒယ်တွေက ဆံပင်အကောက် နဲနဲပါတာလေးတွေနဲ့ ၊ မမှီလိုပဲ ကျွန်တော်လဲလုပ်လိုက်ရင် သူတို့လို လှမှာပဲထင်ပြီး လုပ်လိုက်တာ နောက်ရက် အပြင်မထွက်ရဲတော့ပဲ အမြန် အတို ထပ်ညှပ်လိုက်ရတယ်
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်က ဒိုင်ယာနာ ပုံစံ ခေတ်စားတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ စိတ်ကူးထဲက ကောင်မလေးက ဒိုင်ယာနာကေလေးနဲ့ပေါ့
နောက်တော့ စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူက အရပ်ရှည်ရှည် ဆံပင်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာရော
အင်း တကယ်လဲ ရ ရော ( ဟင်း ဟင်း ဟင်း ……)
အခုကြိုက်တာက ဆံပင် ကျောလယ်လောက် မှာ အတွန့် နဲနဲ ပါတဲ့ပုံစံလေး ၊ မိန်းမကလဲ ဆံပင်သန်တော့ တိုတိုပဲနေချင် ကိုယ်ကလဲ ရှည်စေချင်နဲ့ ၊ ဆံပင် ရှည်လာရင် လိုချင်တာ ၀ယ်ပေးမယ် စည်းရုံးလို့ ရှည်လာလိုက် အုံထူလာလို့ညှပ်လိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတာပဲ
အခုတော့ အပြင်က မိန်းမပုံစံကို စိတ်ကူးထဲ ထည့်ထားလိုက်တော့မှ အေးတော့တယ်
nozomi ရေ ငယ်တုန်းက ရူးခဲ့တာတွေ အခု ပြန်တွေးတော့ ရီချင်စရာနော်။ ဆံပင်အုံထူတဲ့သူက ဆံပင်ပုံရွေးရခက်တယ်။ တိုလွန်းတော့လည်း ခြင်္သေ့ခေါင်း ဖြစ်ရော။ တော်တော် ဂွတီးဂွကျနိုင်တာ။
ဆံပင်ကောက်တာ၊ဖြောင့်တာဟာ chemical တွေနဲ့ ဆံသား၊ဦးရေတို့ ထိတွေ့ရတာဖြစ်လို့ ခဏခဏ လုပ်လို့မကောင်းဘူးလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကျုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် ဆံပင်အရှည်နဲ့ထမီနဲ့မိန်းကလေး ကို သဘောကျတယ်
သို့ သော်….ဆံပင်ရှည် ခြေသလုံးလောက်နဲ့Skinny ဖင်ကျပ်ဝတ်တဲ့ ကောင်မတွေကိုတော့
သောက်မြင်ကပ်တယ် …..တောသူမ မြို့ ရောက်တဲ့ တောဂေါ်လီ ပုံစံတွေနဲ့ 
မျက်စိထဲမှာ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့…..ဒစ္စနေး ကာတွန်းတွေထဲက ရှည့်ငပေါ နဲ့ တူတယ်
ဖင်ကကြီးကြီးနဲ့ဆံပင်ရှည် ဒဂေါက်ခွက်ကြီး ဖြန့် ထားပြီး လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ
ကျုပ်က ဆံပင် အရမ်းရှည်ရင် မကြိုက်ဘူး…..ကျော တစ်ဝက်လောက် ဆံပင်နဲ့ 
ဘီဘဲလ် ထမီ ၀တ်ထားတဲ့ အနိပ်ကလေးတွေများ မြင်လိုက်ရရင် နိဂိမိတို့ များ
သွားရေ တမျှားမျှား နဲ့ ပေါ့
မမှီရဲ့ ပိုစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာ.. ဆူးလည်း ဆံပင်ကောက်ချင်နေလို့.. ဆံပင်ကလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု မလုပ်ရင် ကောက်ထားတာ အလကားပဲ.. စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
အရင်က ကောက်ဖူးတယ် ၂ပတ်မကြာဘူး ပြန်ဆန့်သွားတာပဲ..
ဖြောင့်ဖူးတယ်.. အဲဒါကတော့ ၁နှစ်လောက်ခံပေမဲ့ ဆံပင် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးက မျက်နှာမှာ ကပ်နေတာ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရတယ်။
ပြောသာပြောရတာ.. တနေ့က နွယ်ပင် ကို ဆံပင် ကောက်ကောက်လေးနဲ့ မြင်တော့ သဘောကျနေတာ.. ဒီတခါတွေ့ရင် အင်ဒါဗျူးမလို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပုံတွေကို သူလို လိုက်ကောက်မလားလို့.. အခုတော့ တနေ့ နာရီဝက် အချိန်ပေး လိမ်ရတယ် ဆိုတော့.. စိတ်လျော့လိုက်ပါပြီ။ သဘာဝက ပေးတဲ့ ဆံပင်လေးနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟိဟိ..
ဟိတ်..ပြောရဦးမယ် မဆူးရေ ၊ ကတေကုံး နဲ့ ဆို အရမ်းလိုက်မှာ အသေအချာ ဘဲ ၊ သိလား
ပေါ်ကဋေ ပေကတော် ကို အဲဒီ ကေ ထားခိုင်းလိုက်..
ဆူး ကတော့ သဘာဝ က ပေးတဲ့ ပုံလေးသာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားတယ်။
နက်ဖန် မစ်စတာပေ၏ စကတ်ဒျူး
မနက် ၇ နာရီတွင် တံတားဦးလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး ရရာ ဖလိုက်ဖြင့် ရန်ကုန် သို့ လာမည် ။
နေရာ ၏ ရှေ့ တည့်တည့် အဝင်အထွက်နေရာ မှ တစ်ဆင့် ၊ လျှို့ ဝှက်စွာ မှတ်တမ်းတင်မည် ။
နေ့ လည် ၂နာရီ ဖလိုက်ဖြင့် မန်းတလေး ကို ပြန်မည် ။
မန်းတလေး ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း ၊ ရလာခဲ့သော ဒါ့ပုံလှလှလေးများ ကို ပြန်တင်မည် ။
ဂေဇက်လာ နှင့် ဂေဇက်ဝင်များအတွက်
တွေ့ ဆုံပွဲတစ်ခု သည် မည်မျှ ပျော်စရာကောင်းကြောင်း သိကြရပေမည် ။
အင်း ကောက်တာ ဖြောင့်တာတွေ ပြောနေတော့ အဲလို ကောက်တာ ဖြောက်တာ စိတ်လေးများ ၀င်မိသလားဆိုတော့ မ၀င်မိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ဘားဂျပ်က တယ်မကောင်းလှဘူးကိုး။ ကိုယ်ဆံပင်လည်း ဖြတ်ရသေး ပိုက်ဆံလည်းပေးရသေးတယ်ဆိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ခုတော့လည်း ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းပါတယ်။